Sidee Baan uga Wada Shaqeyn Karnaa Hoolkeenna Boqortooyada?
Hoolalka Boqortooyada ee Markhaatiyaasha Yehowah kulligood magaca Ilaahay oo quduuska ah bay sidaan. Sidaa darteed waxay inoo tahay mudnaan gaar ah inaan ka qaybqaadanno nadiifinta, qurxinta iyo dayactirka dhismooyinkan. Waxay tahay qayb aad u muhim ah oo ka mid ah caabudaaddeenna. Innagoo dhan baana ka qaybqaadan karno.
Kulanka kaddib nadiifinta ka qaybqaado. Asbuucii mar si dhab ah baa loo nadiifiyaa Hoolka Boqortooyada. Kulan walba kaddibna walaalaha iyagoo diyaar ah bay si fudud u safeeyaan hoolka. Odayaasha iyo caawiyayaasha kiniisadda mid ka mid ah baa abaabula hawsha. Waxay raacaan warqad qorsheysa hawlaha la sameyn doono. Hoolalka Boqortooyada hawlo kala duwan bay u baahnaan karaan in laga qabto. Walaalaha waxay diyaar u yihiin inay dhulka xaaqaan, masaxaan ama huufareeyaan, boorka jafaan, kuraasta toosiyaan, musqulaha safeeyaan oona jeermitiraan. Diyaar waxay u yihiin inay dariishadaha iyo muraayadaha dhaqaan, qashinka saaraan ama inay dibadda Hoolka Boqortooyada hagaajiyaan oona beerta dhaqaaleeyaan. Ugu yaraan sanadkii mar maalin baa la qorsheeyaa in hoolka si weyn loo nadiifiyo. Markaan carruurteenna ka qaybgelino hawlaha qaarkood waxaan baraynaa inay ixtiraamaan meeshaan ku caabudno Ilaahay.—Wacdiyahii 5:1.
Dayactirka ka qaybgal. Sanad walba dibadda iyo gudaha Hoolalka Boqortooyada si faahfaahsan baa loo kormeeraa. Markaana dayactir joogta ah oo ku saabsan kormeerkan baa la sameeyaa. Wixii rakibid u baahan waa la rakibaa si aan loo gelin kharash loo baahnayn. (2 Taariikhdii 24:13; 34:10) Hool Boqortooyo oo daryeelan oo haddana nadiif ah waa meel ku habboon in Ilaahayaga lagu caabudo. Marka aan hawshan ka qaybqaadanno waxaan muujinaa inaan Yehowah jecel nahay oo aan qiimeyno meesha aan ku caabudno. (Sabuurradii 122:1) Sidaas daraaddeed bulshadu aragti wanaagsan bay naga helaan.—2 Korintos 6:3.
Maxaan u daryeelnaa meesheenna caabudaadda?
Sidee baa loo qorsheeyaa nadiifinta Hoolka Boqortooyada?
Wadaag Wadaag Sidee Baan uga Wada Shaqeyn Karnaa Hoolkeenna Boqortooyada?